Jamballa: Ukufikelela kwiBlogger yeeMveliso | Martech Zone
Ukufikelela kubhloga inokubonelela ngamashishini ngohlolo oluphezulu, ulwazi ngemveliso kunye nokuqonda okuhle kwegama, ngokulungelelaniswa neebhlogi ezihlonishwayo kwishishini lakho. Jamballa yinkonzo entsha ehambelana neeblogger kunye nebrand ngokudibeneyo ngokusekwe kwiinqobo ezichaziweyo. Oku kuthetha ukuba iibhlog azikhe zaphazanyiswa yimveliso abanomdla kuyo kwaye amashishini aqhagamshelwe kuphela kwiibhlog ezifuna ukusebenza nazo.
Jamballa ikwabonelela ngeenkonzo zokukhutshwa kweendaba eziphuma kwiibhlog kunye nakumatshini othile wokushicilela. Isitshixo kwinkonzo yabo sisibali sokubala sabo esahlukileyo nesisekuhleni kwicandelo, lokucoca ulwelo kunye nokufumana iibhlogi ezifanelekileyo - ukongeza ekunikezeleni ngeendleko zokunyusa ngaphambili.
Ukuhluza kukuvumela ukuba uxele ixabiso lemveliso okanye lenkonzo (isetelwe kwiiBlogger '), indawo ekuyo kwiibhlog, inani lababhalisi kunye neendwendwe ezizodwa nokuba babelana ngezithuba kwimidiya yoluntu. Unokulinciphisa inani leebhlog ongathanda ukunxibelelana nazo.
tags: Ukufikelela kwibloggerbloggereendaba ezuziweyoUkufumana ukufikelela kumajelo eendabaAbathintelijamballa
ISalsa yeZinto ezingenzi nzuzo: Ukunyusa ingxowa mali, iGqwetha, ukunxibelelana